Reuters Ayaa Sheegtay "Gaariga Apple" Inuu Soo Saari Doono Sanadka 2024 | Waxaan ka socdaa mac
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in "Apple Car" ay soo saarayso wax soo saarka sanadka 2024
Dhowr saacadood ka hor warbaahin reer Taiwan ah ayaa ka hadashay imaatinka Apple Car sanadka soo socda wararkan xanta ahna waxay umuuqdaan inay cirka isku shareereen saxaafada iyo dadka isticmaala Apple. Dareenkan hadda "Reuters" ayaa soo ifbaxeysa, iyadoo ka digeysa in soo saarida gaarigaan Apple uu soo saari doono wax soo saarka sanadka 2024 soo socda
Warbixinta Reuters Waxay ka hadlaysaa baytariyada u gaarka ah Apple ee gaadhigan iyo waliba horumarka ay shirkaddu ka gaadhay mashruucan sannadihii la soo dhaafay. Oo kanu ma aha mashruuc cusub oo ka mid ah shirkadda Cupertino ah, ka loo yaqaan "Project Titan" waxaana si rasmi ah u xaqiijiyay shirkadda Apple dhawr sano ka hor waxay taariikh dheer ku leedahay gidaarada xafiisyada Apple.
Maaha dhibaato lacag, Apple wax badan buu leeyahay
Dhibaatada ka jirta kiiskan ayaa ah in soo saarida gaari koronto ku shaqeeya uusan aheyn wax habeen la qaban karo mana ahan wax ay awoodaan dhamaan shirkadaha tikniyoolajiyadda. Lacagta kiiskan wax dhib ah ma lahan waana inay Apple leedahay wax badan, laakiin saadka iyo kheyraadka lagama maarmaanka u ah waa inay noqdaan kuwo aan la koobi karin si ay u qabtaan mashruuc baaxaddaas le'eg.
Sideedaba sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters hadda daraasadaha iyo cilmi baarista waxaa loogu talagalay hagaajinta batteriga, cunsur muhiim u ah gaari kasta oo koronto ku shaqeeya. Xaaladdan oo kale waxay ahaan lahayd baytariyada birta ah ee loo yaqaan 'lithium iron phosphate' si ay uga fogaan lahayd kuleylka. Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in mashruucani uu ku yaal bogga hore ee warbaahinta takhasuska leh waana tan wax wanaagsan maadaama ay ka dhigan tahay in laga shaqeynayo. In kasta oo ay run tahay in aanaan rumaysnayn in gaadhigan Apple-ka ahi iman doono illaa sannadka 2024 sida lagu sharraxay wakaaladda wararka ee Reuters, haddana waxa jira warbaahin ku adkaysanaysa in sannadka 2021-ka aan la kulmi karno waxyaabo kedis ah. Waan arki doonaa waxa dhaca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in "Apple Car" ay soo saarayso wax soo saarka sanadka 2024
Dukaammada Apple qaarkood waxay leeyihiin saamiyada AirPods Max